अब फेसबुक मेसेन्जरमा पठाएका म्यासेज डिलिट गर्न सकिने, कसरी डिलेट गर्ने म्यासेज ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalअब फेसबुक मेसेन्जरमा पठाएका म्यासेज डिलिट गर्न सकिने, कसरी डिलेट गर्ने म्यासेज ?
Home सुचना प्रबिधि अब फेसबुक मेसेन्जरमा पठाएका म्यासेज डिलिट गर्न सकिने, कसरी डिलेट गर्ने म्यासेज ?
वास्तवमा फेसबुकले मेसेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि अनसेन्ड फिचर ल्याएको हो । अब फेसबुक मेसेन्जर प्रयोगकर्ताले मेसेन्जरमा कसैलाई पठाएका म्यासेजहरु डिलिट गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रेषकले पठाइसकेर प्रापकको च्याट बक्समा पुगिसकेका मेसेजहरु समेत प्रेषकले डिलिट गर्न सक्नेछ र त्यसरी डिलिट गरिसकेका म्यासेज प्रापकको च्याटबक्सबाट स्वतः डिलिट हुनेछन् ।
तर मेसेन्जरमा पठाइएका म्यासेजहरु निश्चित समयमा डिलिट गरिसक्नु पर्नेछ । अर्थात् यसरी म्यासेज डिलिट गर्न चाहनेले म्यासेज पठाएको १० मिनेट भित्रमा डिलिट गर्नुपर्नेछ । अन्यथा प्रापकको च्याटबक्सबाट म्यासेज हट्ने छैनन् ।
यो फिचर थप गरिएसँगै अब यदि तपाईंले कसैलाई भुलबस मेसेन्जरमा म्यासेज पठाउनुभयो भने चिन्ता मान्नु पर्दैन । १० मिनेटभित्रमा त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यति बेलासम्म प्रापकले तपाईंको मेसेज नहेरेको पनि हुन सक्दछ ।
अहिलेसम्म मेसेन्जरमा प्रयोगकर्ताले केवल आफ्नो च्याटबक्सबाटमात्र म्यासेज डिलिट गर्न सक्दथे । पठाइसकेका म्यासेज प्रापकको च्याटबक्सबाट समेत हटाइदिने फिचर उपलब्ध थिएन । तर मेसेन्जरमा अनसेन्ड फिचर थप गरेसँगै अब प्रापकको च्याटबक्स बाट पनि म्यासेज डिलिट हुनेछन् ।
स्मरणरहोस् फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गका लागि निकै अघिदेखि नै यो फिचर उपलब्ध थियो । जुकरबर्गले कसैलाई पठाएका म्यासेजहरु प्रापकको च्याटबक्सबाट समेत हटाइदिने गरेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले यस्तो फिचर सबैका लागि उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।
कसरी डिलेट गर्ने म्यासेज
–फेसबुकमा जोडिएका कसैको म्यासेज बक्समा आफूलाई नरुच्ने खालको म्यासेज गए। त्यस म्यासेज तपाईले दश मिनेट भित्र डिलेट गर्नसक्नु हुनेछ। यसरी डिलेट भएको म्यासेज पहिलेजस्तो अर्को प्रयोगकर्ताले देख्ने छैनन्।
–डिलेट गर्न चाहेको म्यासेज दश मिनेट भित्र क्लिन गर्नुहोस्।
– त्यहाँ रिमुभ अप्सन देखिनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
–त्यहाँ रिमुभ फर यू र रिमुभ फर इभरीवन अप्सन देखिनेछ।
–रिमुभ फर इभरीवनमा क्लि गर्नुहोस्।
–म्यासेज सबैका लागि डिलेट हुनेछ।
अण्डा कति र कसरी खाने ?